Juventus oo shaacisay dhaawac soo gaaray 4 Cayaaryahan oo Safkeeda hore ah? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Juventus oo shaacisay dhaawac soo gaaray 4 Cayaaryahan oo Safkeeda hore ah?
(05-11-2018) Kooxda kubaad cagta Juventus oo ah Hogaamiye yaasha Horyaalka Talyaaniga ayaa shaaca ka qaaday in ay dhaawac kaga maqnaan doonaan Cayaratoy muhiim ah kulanka ay lacayaari doonaan Manchester United Arbacada Nagu soo beegan.
Kadib Guushii dhibka badanayd ee ay Todobaadkaan Juventus ka qaadatay Kooxda Cagliar ,Macalinka Naadigaas ayaa shaaciyey in ay Tababarka ka maqnaayeen Subixii Axada Cayaartoyda kala ah Mario Mandzukic, Douglas Costa Blaise Matuidi,iyo Chiellini kuwaas oo laga yaabo in ay ka maqnaadaan Cayaarta Man united.
Juventus ayaa Garoonka Allianz Stadium ku soo dhaweyn doonta Manchester United oo ay lacayaari doonaan Kulanka is araga 4 aad ee Wareega gruubyada koobka Horyaalada yurub waxaana ay leeyihiin 9 dhibcood xoogana masaari doonaan kulankaas waayo waxaa ku soo fool leh Cayaar adag oo ay Garoonka San Siro kula Cayaari doonaan AC Milan 11 ka bishaan.